मलेशियाको जोहोरबारु स्थित के-फोर्स कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुरक्षागार्ड माथी तामिलले धारिलो हतियार प्रहार गरी गम्भीर घाइते | Dainik Sanjal
Home समाचार मलेशियाको जोहोरबारु स्थित के-फोर्स कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुरक्षागार्ड माथी तामिलले धारिलो हतियार प्रहार गरी गम्भीर घाइते
मलेशियाको जोहोरबारु स्थित के-फोर्स कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुरक्षागार्ड माथी तामिलले धारिलो हतियार प्रहार गरी गम्भीर घाइते
गरेर गम्भीर घाइते बनाएको छ । यस्ता खालका घटनाहरु दोहोरी रहने मलेसियामा कतिपयको ज्यान समेत जाने गरेको छ ।
उक्त कम्पनिमा कार्यरत एक कामदारले जानकारी दिदै अन्य सुरक्षागार्डलाई होसियार रहने समेत आह्वान गरेका छन ।
कुटाई खाँदा पनि डलर कमाउँछन् नेपालीले अमेरिकामा
अमेरिकामा नहुने भनेको केही छैन् । चड्कन खाँदा पनि डलर कमाएका छन् । गोधाई खाँदा पनि डलर कमाउने नेपाली पनि भेटिएको उडन्ते समाचार छन् । अमेरिका, अचम्म को देश !
यहाँ बाघे झप्पु खाँदा पनि खानेले पैसा कमाएका छन् । यो शिर्षक पढेर यसरी पनि कमाइने रहेछ भनी अमेरिका पो जानु पर्ने भन्ने नसोच्नु होला । अमेरिकामा गोधाई खाँदा पनि डलर आउने गर्छ । ध्रुब सत्य हो । तर काल परिस्थिति अनुसार डलर फल्छ ।
कानुन कडा भएकोले पीडितको पक्षमा निर्णय अदालतले गरिदिन्छ । साँच्चै कुटाई खाएको हो भने कुट्नेले जोरी अझ खोज्यो भने पैसा कमाउँछ तर उ न्यायालय धाउनु पर्छ । कुटाई खानेले प्रहरी र अदालतमा जान्छु भन्यो भने त्यहाँ पनि डलर फल्छ । नेपाल जस्तो धम्कीले अमेरिकामा काम नगर्ने भएकोले मिलापत्र हुने भनेको दुर्लभ हुन्छ । उदण्ड मानिस दण्डित हुन्छ ।
नेपालमा बाटोबाटोमै कुटाकुट गरेको देखिन्छ । तर अमेरिकामा कुट्न हिम्मत गर्नु पर्छ । झापड हान्न आँट गर्नुपर्छ । बरु सहनु नै बेस हुन्छ । जस्तो सुकै रिस उठे पनि हात भने हाल्नु हुँदैन अमेरिकामा ।
भौतिक कारबाही भनेको नै समस्यामा पर्नु हो । त्यसैले अमेरिकामा हत्तपत्त कुट्ने काम हुँदैन । हात हाल्ने काममा टाढा बस्ने चलन हुन्छ । नेपालमा बाटोबाटोमै कुटाकुट गरेको देखिन्छ । तर अमेरिकामा कुट्न हिम्मत गर्नु पर्छ । झापड हान्न आँट गर्नुपर्छ । बरु सहनु नै बेस हुन्छ । जस्तो सुकै रिस उठे पनि हात भने हाल्नु हुँदैन अमेरिकामा ।
एकपटक थुनियो भने त्यसले जीवनमा नकरात्मक असर पर्छ । जीवनभर पछुताउनु पर्ने हुन्छ । कुट्ने र गोधनेमा रुचि राख्ने मानिस प्रहरीमा परेको छ भने ठूलो फसादमा पर्छ । अमेरिकाको पद्धतिले सबै कुरा छर्लंग देखाई दिने भएकोले मानिस निकै सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।
अमेरिकामा यहीँ जन्मेकाहरु झगडा गर्ने, झापड हान्ने, राम धुलाई दिने आदि कुरामा कुरै नगरे हुन्छ । अमेरिकाका झ्यालखानामा प्रायः यस्तै बाघे झप्पु, गोधने आदि काम गरेर सबै भरिभराउ हुन्छ ।
अमेरिकामा सोचेर मात्र धक्का मुक्का दिनु पर्छ नत्र अदालती फैसलाले ठूलो धनको नाश हुन्छ । धेरै क्षति तिर्नुपर्ने हुन्छ । क्षतिपूर्ति स्वरुप ठूलो रकम पाऊ भनी पीडितले मुद्दा हालेपछि डलर नदिई धरै पाइँदैन । भनिन्छ, पानी मुनि पनि कानुनले पछ्याउँछ ।
तर, साँझ साँझमा कुटिए खाए रकम नपाइन पनि सक्छ । अपराधी समात्न अप्ठेरो हुन्छ । राति कसैले कुटे भने पैसा फल्दैन । कसले कुट्यो कसले ? कुट्ने मानिसको हुलिया नै पत्ता नलागेपछि कहाँ डलर कमाउन सकिन्छ ? उल्टो आफूले क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।
अमेरिकन अफ्रिकन (अस्वेत) ले कुटे भने मानिस डराउँछन् । अस्वेतले यसरी तिर्नुपर्यो भने गोली समेत प्रहार गर्छन् । साक्षी बसिदिने र अदालतमा बयान दिनेलाई समेत हत्या गर्न बेर लगाउँदैनन् । कयौँ नेपाली छन्, यो पीडामा ।
तर, चिनेको मानिसले कुट्यो भने सबै थाहा हुने हुनाले मलाई कुट्यो भनी अदालतमा मुद्दा हालेपछि पिट्ने मान्छे फस्छ । तर अमेरिकन अफ्रिकन (अस्वेत) ले कुटे भने मानिस डराउँछन् । अस्वेतले यसरी तिर्नुपर्यो भने गोली समेत प्रहार गर्छन् । साक्षी बसिदिने र अदालतमा बयान दिनेलाई समेत हत्या गर्न बेर लगाउँदैनन् । उनीहरुले कुटे पनि चुपचाप सहनु बाहेक केही हुदैन । कयौँ नेपाली छन्, यो पीडामा ।
अमेरिकामा आवेदकले कसैलाई मुद्दा हालेको छ भने जागिरमा आबेदन पत्र भर्ने क्रममा त्यो पनि लेख्नु पर्छ । अनि यो मानिस निहुँ खोजाहा रहेछ भनी जागिरमा अलिकति शंका उपशंका गर्छ । त्यसैले अमेरिकामा मुखले जे भनेता पनि हात हाल्न सयपटक सोच्नु पर्छ ।
सानोतिनो कुरामा झगडा गर्ने र कुटपिट गर्ने कुरा सम्भव नै छैन् । कसैलाई हात लगाउनु भनेको काललाई कुतकुत्याउनुझैँ हुन्छ । दण्ड तिर्नुपर्छ । धेरै ठूलो राशीको क्षति हुन्छ । त्यसैले नेपालीहरु हत्तपत्त झगडा नै गर्दैनन् ।
यसो भन्दैमा बरु कुटाई खाए खान्छु डलर त आउँछ चै भन्ने नसोच्नुहोला । आफूले दुख पाउने हुनाले कुटाई खाई खाई कसैले कमाउनु नपरोस । यस्तो अवस्था हामी नेपालीहरुले कहिले भोग्नु नपरोस् । आफ्नो परिश्रम र मेहनतले कमाऔँ ।
लेखक भर्जिनिया निवासी नेपाली संचारकर्मी हुन् ।